News - Anwụnyela igwe ihe ntanetị 3000W na-arụ ọrụ na France nke ọma
Site na nyocha na mmepe iji chepụta na mmepụta, mgbe ụbọchị 40 nke mgbalị nke ndị ọrụ SUNTOP niile, anyị ahaziri nri zuru ezu na ibudata CNC fiber laser cutting machine na-aga nke ọma na France.
Gba ọsọ na-agba ọsọ na ibudata ngwa ngwa, nke bụ oge 2 nke Germany TRUMPF cantilever ụdị ntinye na ibudata n'otu ụlọ ọrụ ahụ. Onye ahịa ahụ nwere afọ ojuju banyere teknụzụ SUNTOP anyị.
N'oge na-adịbeghị anya, SUNTOP enweela usoro nri na ibudata ngwa ngwa na-arụ ọrụ nke nwere ike ibu 2500KG nke kwesịrị ekwesị maka nnukwu na nnukwu mpempe akwụkwọ na-ebu ma na-ebudata, ọ ga-echekwa ụgwọ ọrụ, mee ka ogbako ahụ ghara ilezi anya, wee dọọ ezigbo ntọala maka ụlọ ọrụ 4.0.
Site na echiche nke ndị na-egwu ahịa ahịa, mbubata na mbupụ nke ụlọ ọrụ nke onwe ha mụbara nke ukwuu, na ọrụ nke azụmahịa mba ọzọ "stabilizer" pụtara ìhè. Data gosiri na n'ime ọnwa iri mbụ, mbubata na mbupụ nke ụlọ ọrụ nkeonwe ruru yuan trillion 12, mmụba nke 10.5%, na-echekwa 46.2% nke uru ahịa mba ofesi China, mmụba nke pasent 3.9 karịa otu oge n'afọ gara aga . N'ime ha, mbupụ bụ 7,94 puku ijeri yuan, mmụba nke 10,9%, aza ajụjụ maka 55,4% nke ngụkọta mbupụ uru; mbubata bụ yuan trillion 4.06, mmụba nke 9.7%, na-echekwa 35% nke uru mbubata.
N’ile anya n’odinihu, ana atu anya na ahia ndi mba ofesi n’ime aho n’ile dum ga-aga n’ihu na-ejigide mmezi. Tang Jianwei, onye isi nyocha nke ụlọ ọrụ nyocha banyere ego nke Bank of Communications, kwuru na mbubata mbubata na ọnụahịa nke igwe, soybean na ngwaahịa ndị ọzọ buru ibu, na-egosi na mkpa anụ ụlọ esighi ike. Ndenye mbubata nke PMI na Ọktọba bụ 50.8%, pasent 0.4 dị elu karịa nke ọnwa gara aga, ọ dịkwa n'elu ọganihu na ọgbụgba maka ọnwa abụọ. Site na mgbake nke oriri ụlọ na mmepụta ihe, a na-atụ anya ka mbubata mbubata na-esote.
Post oge: Jul-28-2020
Eriri Laser tube tingcha Machine, Pipe Fiber Laser cutter, Eriri Laser Pipe tingcha Machine, China Fiber Laser tingcha Machine, Tube Laser cutter, Eriri Laser tingcha Machine,